Inona no hitan'ny biby fiompinao alohan'ny hahafantaranao azy | Bezzia
Fantatrao ve izay rehetra hitan'ny biby fiompinao? Satria tsy tongatonga ho azy fa amin'ny fotoana sasany dia tsy mitovy amin'ny mahazatra izy ireo. Toa misy aretina maromaro afaka mamofona azy ireny. Fantatsika tsara fa ny fofona dia iray amin'ireo toetra tsara ananan'ny biby fiompy, noho izany dia avy eo ny tsara indrindra.
Satria marina ny voalazanay fa ny aretina dia hita fa tsy foana. Amin'ny toe-javatra sasany ho vaovao tsara koa izany, mba hiandrasanareo ny handre izany ary ny biby fiompinao no afaka mampitandrina anao amin'izany. Ankehitriny ianao dia tsy maintsy mihaino bebe kokoa noho ny hatramin'izay ny fihetsik'izy ireo!
1 Inona no hitan'ny biby fiompinao: Kanseran'ny prostaty
3 Ny fahafatesana
4 Miova ny toetrandro
5 Ny fihetseham-ponao
6 Epileptic seizure
Inona no hitan'ny biby fiompinao: Kanseran'ny prostaty
Marina fa lohahevitra sarotra ny misy azy ireo. Saingy toa misy fanadihadiana milaza fa mety ho fofona ny aretina ny biby fiompy alohan'ny hahafantaran'ny tenany ny fisiany. izany Noho ny fahatsapan'ny fofona mivoatra no mahatsikaritra fa misy zavatra mitranga na amin'ny alalan'ny rora na ny hatsembohana. Na dia ilaina amin'ny karazana homamiadana maro aza izy io, dia marina fa ny homamiadan'ny prostaty dia iray amin'ireo azon'ny alika. Manana isan-jaton'ny fahadisoana kely indrindra amin'ny biby izy ireo.
Efa nandroso izahay fa tsy ho vaovao ratsy daholo izy ireo. Noho izany, izy ireo ihany koa ny biby fiompy hahalala fa mpikambana vaovao hody tsy ho ela. Mitovitovy amin’ny tranga teo aloha izany, satria noho ny fofony afaka mahita fiovana hormonina. Noho izany, angamba izy dia mahafantatra izany amin'ny fotoana mitovy aminao na taloha kelin'izay aza. Noho izany dia hahafantatra antsika mandrakariva izy satria fiainam-baovao no mitoetra ao anatinao ka noho izany dia te hiaro izany hatrany am-boalohany koa izy.
Misy trangan'ny saka sy alika afaka mamantatra ny fahafatesana. Toa taona vitsivitsy lasa izay no nahitana azy saka nahafantatra hoe rahoviana ny antitra no ho faty ary hiankina aminy taloha kelin'ny tonga ny fotoana. Marina fa isaky ny mandry ny biby fiompintsika dia tsy midika izany fa hisy zavatra hitranga, fa midika izany fa amin'ny toe-javatra sasany dia mety hanimbony azy. Ankehitriny isika dia hiezaka ny tsy ho variana satria ny biby fiompintsika dia tsy omena tsiny noho ny fananana andiam-pahefana izay mahatonga azy ho miavaka kokoa.
Miova ny toetrandro
Ny fiovan'ny toetr'andro lehibe indrindra toy ny fahatongavan'ny tafio-drivotra na ny rivodoza dia anisan'ireo safidy azon'ny biby fiompy. Satria tsikaritr'izy ireo fa ho avy ny fiovana ary mitondra any amin'ireo voalaza ireo ihany. Ny alika dia ho sahiran-tsaina kokoa alohan'ny hidiran'ny tafio-drivotra. ary tsy hitsahatra ny hifindra avy amin'ny lafiny iray ho amin'ny ilany. Mazava ho azy fa mety hanana karazana fitondran-tena hafa ny biby fiompinao. Satria amin'ny ankapobeny dia zavatra mampatahotra azy ireo izany ary noho izany dia mety hanana fitondran-tena isan-karazany izy ireo.
Araka ny hevitray dia afaka mahafantatra ny biby fiompinay izahay, vao mainka tsara kokoa izy ireo ny fihetseham-pontsika. Raha malahelo na ory ianao dia ho fantany izany ary tsy hamela anao ho irery na ho irery izy ireo. Satria io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra ananany hanehoana ny fitiavany anao. Noho izany, ity orinasa ity dia iray amin'ireo tsy mivadika sy ilaina indrindra amin'ny fiainantsika.
Tokony holazaintsika indray izany ireo karazana fanafihana ireo dia mifandray amin'ny fofona tena mampiavaka fa ny biby fiompy ihany no afaka mamantatra izany alohan'ny hitrangan'izany. Noho izany dia fanairana tsara foana ny mahafantatra ny fotoana hitrangan'ny fisorohana ny fianjerana ary mba hisy fampitandremana mialoha ny fanafihana. Fantatrao ve izay rehetra hitan'ny biby fiompinao? Amin'izao fotoana izao dia azo antoka fa hitandrina kokoa ianao na hihaino ny fihetsik'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Mascotas » Inona no hitan'ny biby fiompinao alohan'ny hahafantaranao azy
Araraoty ny varotra Pikolinos, ampio amin'ny fampiononana